Pepperdine University- Study muna USA, California. EducationBro.com
guta : Malibu
inotangwa : 1937
Musakanganwa kuti kurukura Pepperdine University
Kunyoresa pana Pepperdine University
Pepperdine University ndiyo yunivhesiti voga kuti rakaumbwa 1937.
Muripo mazai ari Pepperdine University ndivo $50,00 (Aprox.).
Kusvinwa pakati Santa Monica Mountain memakomo, Pepperdine University ari kukoreji wechiKristu yaizivikanwa wakajeka nzvimbo muna Malibu, Calif. The chikoro anotsigira New Testament anotsanangura tsika Churches kwaKristu. Students vanofanira kupinda 14 zviitiko yomudzimu kwetemu uye tora zvitatu chitendero makosi munguva yavo Pepperdine. Kune Kereke yaKristu uri kembasi, uyewo tsama oushumiri mudzidzi-akatungamirira. Kunze chechi, yepachikoro mitambo zvikwata, ari Pepperdine Waves, kukwikwidzana mune Division I West Coast Conference. Vadzidzi kunogonawo kuridza kirabhu mitambo, akadai Lacrosse uye Triathlon boka, uye zvakasiyana-siyana intramural mitambo, kubva Dodgeball kuti Beach nevolleyball. Freshmen uye sophomores vanofanira kurarama yunivhesiti dzimba pamusoro pevhu pazvivako, uye vatungamiriri mudzidzi upenyu hwomudzimu kurarama wega wega horo. About 25 muzana yevadzidzi vari kushingaira vanopfuura gumi nevaviri sororities uye fraternities, kunyange hapana dzimba Greek pamutemo musi kembasi.
Kuwedzera kwaro chikuru kembasi muna Malibu, Pepperdine University rinopa akapedza kudzidza kosi pana California pazvikoro muLos Angeles, Irvine, Santa Clara, Encino uye Westlake Village. The chikoro anewo zvivako muGermany, England, Itari, Siwizarendi, Argentina uye Washington, D.C.. Beverly Hills ndiye 24 nemakiromita uye Disneyland ndiye 54 zvemakiromita kubva Pepperdine raMwari Malibu kembasi. Los Angeles iri pamusoro yeawa nemotokari kure. Chikoro chacho kudzidza dzakawanda pamusoro Vamhanyi, kusanganisira yebaseball mutambi Randy Wolf, golfaaja Jason Allred, Basketball mutambi Alex Acker uye Beach nevolleyball Olympic medalist Nicole Sanderson, pakati yayo akakurumbira alumni zhinji.
Frank R. Seaver College Tsamba, Arts, uye Sciences
Seaver College rinopa tsvimborume uye watenzi dhigirii zvirongwa mukati sere zvechikoro mapoka.
Graduate School of Education uye Psychology
Experience kudzidza muzviito edu nyanzvi-vaiita womuenzaniso. Panguva Graduate School of Education uye Psychology, ane maoko-mberi wokuita chinokosha tenzi uye dhigirii dzidzo doctorate, uyewo kuramba dzidzo okudhindira.
George L. Graziadio School of Business uye Management
Kuwana dzidzo bhizimisi chinokodzera nyanzvi zvinangwa zvako uye pachako mabasa kuburikidza Pepperdine yakazara- uye chikamu-nguva dance, dhigirii kunoita watenzi uye tsvimborume, uye chitupa zvirongwa.
Nokupinza hwako pachako netsika ane repamutemo dzidzo akapedza zvidzidzo paChikoro Pepperdine University School of Law, izvo dzimba nhamba imwe purogiramu nharo chisarudzo munyika.
Kuwana tenzi paruzhinji inozowana dhigirii panguva Pepperdine University School of Public Policy purogiramu yakazara panguva yedu Malibu kembasi.
In February 1937, kuzorwa colour Kwoupfumi Kukuru, George Pepperdine akatanga yunivhesiti sezvo muKristu norupo Arts kukoreji muguta Los Angeles. On September 21, 1937, 167 vadzidzi vatsva kubva 22 siyana inoti uye dzimwe nyika mbiri akapinda makirasi ari kembasi ichangovakwa pamusoro 34 maeka (14 zvaainazvo) pana West 79th Street uye South Vermont Avenue muna Vermont Knolls pedyo South Central Los Angeles, anotaurwa akazotevera sezvo Vermont Avenue pazvivako. By April 6, 1938, George Pepperdine College akanga zvizere abvumirwa neDare Northwest Association.
Pepperdine aakavaka mhanza kuvambwa uye kukura kuWestern Auto Supply Company, izvo akatanga aine $5 inivhesitimendi, asi kubudirira kwake kwakaita kuti ake vavariro chikuru kuona “sei vanhu vangabatsirwa vakawanda vane nzira akaronzesa vatarisire. Vaiona chakaipa kuvaka mhanza kukuru uye kurishandisa zvokushamisira.” Mr. Pepperdine vataura chinangwa chake zviviri nokuda pakoreji kuti akatakura zita rake, “Chekutanga, tinoda kupa vomuzana kirasi, zvizere Accredited zvedzidzo kudzidziswa worupo hwemashiripiti … chepiri, tiri kunyanya vakazvitsaurira kuna chinangwa-kuti mukurusa anovaka mudzidzi ane Kristu-kufanana upenyu, kuda chechi, uye chido mweya vanhu.”
By kuma1960, muduku pakoreji vakatarisana nezvinetso zvakakomba. Nharaunda yakapoteredza Vermont Avenue pazvivako yakatanga vanaamwene mhosva uye kuora dzomumaguta; kusawirirana wakasimukawo yakafanira kune Civil Rights Movement oedza circumvent nayo akadai California pfungwa 14, izvo akashora akanaka mitemo dzimba batana. Mamiriro waimera ari 1965 Watts mhirizhonga. mu 1969 vatsigiri munharaunda Watts paakatyisidzira kupisa pasi pazvivako; zvisinei, vakanga vakataura mairi pashure zvose-usiku kwakadzama panguva iyoyo-President M. Norvel Young.In Kuwedzera, ari Vermont Avenue pazvivako akanga vopererwa mukamuri kuwedzera.
mu 1967, chikoro akatanga kuronga kuita Rokutenderwa pazvivako uye komiti rakaumbwa kutarisa kumwe munzvimbo, kusanganisira nzvimbo Valencia, Orange County, Ventura County uye Westlake Village. Pepperdine aifarira Westlake Village nzvimbo kusvikira mhuri Adamson-Rindge, muridzi mazana maeka pedyo Malibu, vakapa 138 maeka (56 zvaainazvo) munyika. Pasinei nezvokunetseka pamusoro chivakwa mari pamusoro makomo panzvimbo, chikoro vakasarudza kutamira mberi kwakavakirwa wayo mukuru nzvimbo uye zvinogona nokumutsa mipiro. Construction akatanga musi April 13, 1971 uye pazvivako zvitsva inozarurirwa mudzidzi anyorese September 1972. The kembasi uye vazhinji kwezvivako zvayo vakanga kwakarongwa mapurani Los Angeles anotsanangura uye mumaguta Murongi William Pereira.
The Old kembasi akatengeswa kuti Crenshaw Christian Center, ane mushumiri, Frederick K.C. mutengo, ipapo aitarisira kuvaka “FaithDome,” chikuru domed-chechi muUnited States, Inokwana pamusoro 10,000.
Pepperdine akawana University kwemaonerwo 1971 apo chikoro mutemo Wakawedzerwa uye bhizimisi uye dzidzo madhipatimendi yakakamurwa zvikoro. Munguva 1980s, Pepperdine akasimuka nomukurumbira somumwe United States’ vaitungamirira nzvimbo vaitevedza zvematongerwo enyika, yokukwezva vazhinji kumashure-akasendamira mapurofesa kubva UCLA pedyo uye USC. Vakakurumbira kuzvikudza pamusoro Pepperdine fakaroti zvaisanganisira Bruce Herschensohn, Ben Stein, Kenneth Starr, Arthur Laffer, Douglas Kmiec, uye Daniel Zvikwepa.
mu 1985, 1993 uye 1996, wandisa brushfires pangozi pazvivako nokuparadzwa, asi vemoto zvinobudirira kudzivirirwa zvinenge zvose hurongwa. On October 21, 2007, moto womusango Fast kubvongodzwa kumanikidzwa kembasi vagari atamire uye vavande mumba Firestone Field uye zvokudya, ndinoiitawo evacuations dzimba omunharaunda uye mabhizimisi. Saizvozvowo, mumwe November 2007 moto Corral Canyon, netsaona kupatsanura neboka Los Angeles vechiduku, Vachauyawo kubvisa of Drescher pazvivako. zvisinei, vadzidzi vakawanda vaiva kure-kembasi nokuda Thanksgiving pazororo.
Unoda kurukura Pepperdine University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Pepperdine University musi Map
Photos: Pepperdine University pamutemo Facebook
Pepperdine University wongororo
Join kukurukura pamusoro Pepperdine University.